Yiyiphi imbali efihla uphawu lweDoritos | Abadali be-Intanethi
Siyathemba ukuba nawe ungomnye wethu kwaye uzive unothando olungagungqiyo ngakuDoritos. Ngokuqinisekileyo, uvule ibhegi ngelixa ubukele iTV, udlala imidlalo yevidiyo, njenge-appetizer yepati, njl. Nasiphi na isihlandlo silungile ukonwabela ezi snacks.
Iichips zeTortilla ziye zavela ngokuhamba kwexesha, kwaye indlela efanayo ilandele umfanekiso wayo. Siza kuthetha ngale nto kolu papasho, malunga ukuvela kwelogo yeDoritos kunye nento ekhokelele kuyo.
Uhlobo lwesnack, oluphethwe liqela lePepsico Food eSpain, iye yatshintsha umfanekiso wayo izihlandlo eziliqela ukuze ibonise ubuntu obutsha kubathengi bayo. Uphawu lobuntu olubonakalisa amandla, ubuxhakaxhaka bexesha langoku kunye ne-adventure, apho kufuneka usondele kuluntu oluncinci.
I-Doritos, njengoko sisazi sonke, zisnacks zecorn tortilla ezimile okwenxantathu ezinongwe ngetshizi, ipepile kunye nezinye izithako. Emveni kweminyaka, i-brand iye yandisa imarike kwaye ikhupha iincasa ezintsha.
1 Imbali yeDoritos
2 Imbali yelogo yeDoritos
IiDoritos, zinayo imvelaphi ngonyaka we-1914, kwisixeko sase-Indianapolis, apho umfumani wayo u-Arch Clark West wayehlala khona. Xa wayesemncinci, utata ka-Arch wasweleka ngequbuliso kwaye umama wakhe akazange akwazi ukubakhulisa eyedwa.
Yonke le meko yakhokelela ekubeni abazalwana basiwe kwikhaya lokukhulisa abantwana, i-Indiana Masonic Home, apho bachitha iminyaka eliqela yobomi babo.
Ngo-1961, ungumongameli wenkampani yakwaFrito, i-snacks subsidiary ye-Pepsico kunye ne-Frito-Lay. Kolunye lohambo lwentsapho ababedla ngokuluthabatha, uArchibal West waphawula ukuba kwenye yeebhari ezisecaleni kwendlela ababemisa kuyo, babekhonza ukutya okukhatshwa ngamaqhekeza ombona wombona.
Con le ngcamango entlokweni yakhe, waya kwinkampani yakhe waza wayibonisa. Kodwa ngenxa yemeko yemali yenkampani, ayizange iqhutywe.
Ngexesha elithile kamva, iinkampani ezimbini ezibalulekileyo zidibene, kwaye ngonyaka Ngo-1964, kwaqala ukuveliswa kweesnacks ezazicetywe nguArchibal West, phantsi kwegama likaDoritos.
Igama Doritos, has a imvelaphi enxulumene nenkqubo yemveliso yemveliso. Apho umbona udlula kwisigaba se-browning, oko kukuthi, ukupheka ngaphandle kokuqhotyiswa, kwaye eli gama, i-browning, kukwakhiwa kwe, i-brown yegolide.
Imbali yelogo yeDoritos
I-logo yokuqala ye-brand ibonakala ngo-1964, kwaye ukususela ngoko iye yaguquka de ikwazi ukubona umfanekiso we-triangular yelogo yayo.
La imbali yale logo kukho abo bayahlulahlula ibe zizigaba ezibini, isigaba sokuqala ngo-1964, apho sifumana ilogo eyenziwe ngezikwere kunye ne isigaba sesibini ngo-1994, apho unxantathu sele iqalile ukusetyenziswa.
El I-logo yokuqala ye-brand, eyenziwe ngo-1964, apho uluhlu lwemibala emi-3 yasetyenziswa shushu, tyheli, obomvu kunye ne-orenji. Iileta ezenza igama le-brand nganye zibekwe kwi-rectangle enemibala kwaye zenziwe nge-typography kunye ne-serifs kunye nemigca egobileyo.
Le logo igcinwa malunga 9 iminyaka. kwaye ingaphakathi Ngo-1973, xa uphawu lubonisa ukuyilwa kwakhona kokuqala, apho kwakukho ukubunjwa kwemibala eyahlukileyo kuleyo yangaphambili.
Kule meko, i imibala iya ingathathi hlangothi ngakumbi, umthubi ohlabayo onjalo awusasetyenziswa. Imvelaphi yayiseseti yeengxande ezinemibala, equlethe unobumba wegama lophawu ngaphakathi.
Kule logo ukusuka kwi-1973, unokubona indlela i-chocolate yombala eyaqala ngayo ukusetyenziswa kwigama le-brand. I-typography yayilungelelaniswa, eyakhokelela kwibhalansi ehambelanayo, ekubeni iqhubekile igcina i-symmetry encinci kakhulu.
Kwiminyaka kamva, kwi Ngo-1979, uyilo lophawu lwenziwa utshintsho, amaxande awenza imvelaphi ayengasahambelani noonobumba., kodwa bona batyekela. Ukuze igama le-brand lingabikho kwindawo, kwagqitywa ukuba kuncitshiswe indawo phakathi kwabalinganiswa.
Phakathi kweminyaka, I-1985 kunye ne-1994, isetyenziswe okokugqibela, i-logo yenziwe ngoxande kwimvelaphi yayo.. Igama le-brand liba likhulu kwaye umbala omnyama usetyenziselwa iileta zayo, ngaphezu kolwandlalo olumhlophe.
Ukuba sijonga ngenyameko, i ingongoma yesiLatini i, ilungiswa ukuze ibeke unxantathu, kubhekiselwa kwimilo yeetortilla zombona.
Imibala eyayisetyenziswa, iphinda iithoni ezibethayo, ezidlala ngomthubi oqaqambileyo kunye nobomvu orenji nzulu. Kwangaxeshanye, kunokubonwa ukuba inani lamaxande asetyenzisiweyo lancitshiswa laya kutsho ezintlanu.
Esiphakathini se I-90, uyilo lokuqala lwe-brand lubonakala lunemilo ye-triangular, esele iluphawu lophawu. Egameni, ulwandlalo olutyheli luvela, inqaku le-i lisagcinwa, kwimilo engunxantathu.
Zonke Igama lebrand, livela likhatshwa yimilo engunxantathu emthubi, ibekwe ezantsi kokubunjwa, ngokubhekiselele kwi-snacks. Ngaphezulu konxantathu otyheli, kukho ulwandlalo olungaqhelekanga olubomvu, olugxininisa igama lophawu, lugxininisa.
Emveni kweminyaka, uphawu lugqiba ukunika utshintsho olutsha kumfanekiso walo. I-logo yakhiwe ngaphakathi kwixande elimnyama, elinemiphetho engalinganiyo. Igama le-brand liye latshintsha umbala, ukusuka kumnyama ukuya kumhlophe.
Kule ndlela, into entsha yaziswa, kwaye libinzana elithi, chips zombona, ekhanga amehlo ababukeli ngokusetyenziswa kombala ophuzi ophuzi.
Kwiminyaka I-2000, imvelaphi yoxande iyanyamalala ngokupheleleyo, inika unxantathu omnyama. Le milo yejometri inqunyulwa yimivimbo emithathu ye-triangular yemibala eyahlukeneyo, eluhlaza okwesibhakabhaka, emhlophe kunye nomnyama. Akunjalo nje imibala eyahlukileyo, kodwa kunye nobukhulu bomgca, obubonelela nge-asymmetry ekubunjweni.
Kwiminyaka emihlanu kamva, in 2005, Doritos yenza utshintsho olukhulu kumfanekiso brand yayo. Le nguqulo yavela kuphela kwiishelufa zevenkile e-United States. I-brand yakhetha uhlobo lohlobo lwe-sans serif kunye nomdlalo wemibala emhlophe kunye nengwevu, kunye nemigca ebomvu kwiimpawu zayo kunye nesiphumo somthunzi we-gradient ngasemva.
Kunyaka Ngo-2007, kwihlabathi liphela, uDoritos uye wasinika umfanekiso omtsha, wangoku ngakumbi kunye noxineneyo.. Iimilo zahlaziywa, unxantathu waba ngumbane oluhlaza, uhlobo lokubhala lwagcinwa kwisitayile se-sans serif, kwaye ichaphaza eliku-i latshintshwa laba tyheli.
Emva kwezigaba ezininzi zotshintsho kwilogo, unxantathu ulapha ukuhlala. Uyilo lwe I-2013, evela eDoritos yiyo eqhubekayo kuze kube namhlanje iphinde yaveliswa kwi-package yeemveliso zayo.
Kule logo entsha, imilo engunxantathu idlula emehlweni oonobumba o, ukunika umfanekiso amandla ngakumbi. I imilo yejometri, iqulethwe ngokungahambi kakuhle, igqitywe ngamanqaku kwaye inemibala kwithoni ye-orange kunye nemiphumo eqaqambileyo.
Igama le brand, iyaqhubeka nokugcina i-sans serif typeface, kunye ne-white cast kunye nemiphumo ye-XNUMXD kubalinganiswa bayo, inika ukujonga okuqhubekayo.
Kunyaka Ngo-2019, uphawu lwalulutshintsho kwimarike, xa usondela kuluntu oluncinci, Amalungu esizukulwana Z. Njengoko sonke siyazi, uninzi lwesi sizukulwana alusondele kakhulu kwiimpawu, nto leyo eyabangela ukuba uDoritos aphelise umfanekiso wabo kwaye abeke endaweni yawo umbhalo obonisa ukuba uphawu lukhona.
Ngeli phulo, wayenethemba lokuba eyakhe esona sizukulwana sisondeleyo sikawonke-wonke kunye nesizukulwana esitsha, yazi imveliso yakho kunye ne-brand ngaphandle kwesidingo sokubona uphawu.
I-Doritos ibisoloko iyazi indlela yokuziqhelanisa nokutshintsha komfanekiso, ngokuhlonipha uphawu lwayo. Oku kuya kucaca ngakumbi xa uqala ukusebenzisa imilo engunxantathu kuyilo lwakho. Imibala emnyama, emhlophe, ebomvu kunye ne-orenji luphawu lolu phawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yiyiphi imbali efihla uphawu lweDoritos
Uzoba njani nge-Illustrator